Lifestyle - All Things Myanmar Burmese
Lifestyle - shweDarling.com Blog
little Sai Sai
Posted in Asia Entertainment, Astrology | No Comments »
credit to Khai Linn Aung
Posted in Knowledge Base, Photography, shweDarling, WWW/News | 1 Comment »
Joke of the day about Irrawaddy PM’s speech
Posted in Food, Free Burma, Humor, Job Vacancy & Career Day, Knowledge Base | No Comments »
Royal soldier … Prince Harry aka Captain Wales during his embed with Australian troops. Source: AFP Hang in there … The prince demonstrates his impressive upper-body strength. Source: AFP Damp prince … Harry goes under water with Royal Australian Navy Clearance Divers. Source: AFP Taking care of business … Harry on explosive ordinance disposal techniques […]
Posted in Knowledge Base, Photography, shweDarling, WWW/News | No Comments »
Whether you’re trying to lose weight, keep fit or feel good, there is one rule to follow. Eat healthy food with low calories. Researches have said thatawoman should eat about 1200 caloriesaday to lose weight andaman about 2000. That means about 300 – 450 calories for3main meals […]
Posted in Food, Knowledge Base | No Comments »
သြဂုတ်လအတွက် (၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် ——————————————— တနင်္ဂနွေ သားသမီး ထင်တိုင်း ပေါက်မြောက်အောင်မြင်မည့် လ,ဖြစ်သော်လည်း လူပန်း စိတ်နွမ်းရမှု များမည်။ တာဝန်ကြီးကြီးမားမား ယူရတတ် (သို့) ပိနေတတ်သည်။ ရန်အတိုက်အခံရှိမည်။ မုဆိုးဖိုမုဆိုးမ,တစ်ခုလပ်များ၏ ဒုက္ခပေးမှုကို ခံရတတ်သည်။ အတိုက်အခံရှိသော်လည်း ကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မည်။ ခရီးယာယီရှိသည်။ ခရီးများ သွားလာခြင်းဖြင့် ကောင်းကျိုး တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်။ အလုပ်ရာထူးတက်ရန် ရှိသူများ ရာထူးတက်မည် (သို့) နေရာကောင်း ဌာနကောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရတတ်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကိစ္စ ပွင့်လန်းတိုးတက်နေမည်။ ထိခိုက်ရှနာကိန်း ရှိသောကြောင့် ဒါးနှင့်ချွန်ထက်သော ကရိယာများ ကိုင်တွယ်ရာတွင် သတိထားပါ။ မီး နှင့် လျှပ်စစ်ကို ကိုင်တွယ်ရာတွင်လည်း သတိထားကိုင်တွယ်ပါ။ အိုးအိမ်နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ ကံကောင်းတိုးတက်နိုင်သည်။ ယေဘူယျပြောရလျှင် ထိခိုက်ရှနာမှု နှင့် ရန်အနည်းငယ် […]
Posted in Articles, Astrology | No Comments »
Modem Ad. about Astrology
Posted in Astrology, Humor | No Comments »
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ——————————- အလှူအတန်းကိစ္စများ မုချလုပ်ရမည်။ ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက် ၀င်လာလိမ့်မည်။ မိမိ၏ အလုပ်မှလည်းကောင်း၊ ထီပေါက်၍လည်းကောင်း ၀င်လာတတ်သည်။ ဤကာလမျိုး၌ သာမန်အခြေအနေမျိုးမှနေ၍ စီးပွားအရှိန်အဟုန် နှင့်တက်ကာ လက်ရှိအခြေအနေထက် အဆပေါင်းများ စီးပွားတက်လိမ့်မည်။ မိမိလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့် အားနှင့် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သင့်သော်လည်း ဖြတ်လမ်းမလိုက်ရန် သတိပေးလိုပါသည်။ မိမိအား ပြဿနာလုပ်နေသူများ ရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားမည်။ မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည်။ အဖိုးတန်ကျောက် မျက်ရတနာများ ၀င်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်ရသော ကာလဖြစ်သည်။ အထက်လူကြီး၊ မိသားစု ကြီးကဲသူများကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။ အတူနေမိသားစုထဲမှ အကြီးအကဲ အဘိုး အဘွားများအရေးဖြစ်တတ်သည်။ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ ခရီးများမကြာခဏ ထွက်ရတတ်သည်။ ထိုခရီးများသည်လည်း အကျိုးပေး […]
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ——————————- ယခုလသည် မိဘကို ကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ စီးပွားသိသိသာသာ တက်မည်။ သိကြားမ လိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွာမြင့်တက်သွားလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မူရမည်။ လုပ်ငန်သစ်များ စတင်ပြု လုပ်နိုင်သော ကာလ၊ လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်ပေါ်တတ်သည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာစရာခရီးများ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများ သွားတတ်သည်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူးတက်ခြင်း အခြေအနေ အဆင့်အတန်း မြင့်တက်ခြင်းများကြုံမည်။ သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်း ပညာကောင်း ရခြင်းများ ကြုံမည်။ မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်များ တွေ့မည်။ အဖိုးတန်စက်ပစ္စည်များဝင်မည်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေရှာရလွယ်ခြင်း ငွေအ၀င်အထွက် ကြမ်းခြင်းများ ကြုံလိမ့်မည်။ ရပ်ဝေးမှစာများ အဆက်အသွယ်များ ရလာမည်။ ရန်များခြင်း စကားများဖြေရှင်းရခြင်း ရင်နှီးသူများ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် အဆင်မပြေလမ်းခွဲရခြင်းများ ကြုံမည်။ […]
တနင်္ဂနွေ ဤလအတွင်း၌ သင်သည် အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာများ ကြုံတွေ့လာရလိမ့်မည်။ ယခုကာလတွင် အိမ်ထောင်ပြုပါက တည်မြဲသော အိမ်ထောင်မဖြစ်နိုင်၊ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် သားသမီး ပါလာတတ်သည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ရတတ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည်လည်း လွန်စွာကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်သည်။ ရွှေဝင်မည်။ ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်မည်။ ဘုရားဆင်းတုတော်၊ ပုံတော်များ ကြွလာမည်။ သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းသောနိမိတ် ဖြစ်ပါသည် ဤကာလအတွင်း၌ စီးပွားအလွန်ကောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်တရား အထူးအရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အမှုအခင်ဖြစ်နေသူကို ငွေမချေးပါနှင့်၊ အာမခံ မလိုက်ပါနှင့်၊ သတိပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပတ္တမြား မြ ထွက်တတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အဆင်မပြေ ကြီးစွာဖြစ်တတ်သည်။ သွပ်၊ သံ၊ […]
Posted in Astrology, Knowledge Base, shweDarling | No Comments »
ဂုဏ်သတ္တိများ. မွေးနေ့..မွေးရက်များနဲ့ သူရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများ. တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 1st, 10th, 19th, 28th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၁) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 2nd, 11th, 20th, 29th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၂) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 3rd, 12th, 21st, 30th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၃) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 4th, 13th, 22nd, 31st မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၄) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 5th, 14th, […]
Posted in Astrology, Knowledge Base | No Comments »
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် အလှူအတန်းကိစ္စများ မုချလုပ်ရမည်။ ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက် ၀င်လာလိမ့်မည်။ မိမိ၏ အလုပ်မှလည်းကောင်း၊ ထီပေါက်၍လည်းကောင်း ၀င်လာတတ်သည်။ ဤကာလမျိုး၌ သာမန် အခြေအနေမျိုးမှ နေ၍ စီးပွားအရှိန်အဟုန် နှင့်တက်ကာ လက်ရှိအခြေအနေထက် အဆပေါင်းများစွာ စီးပွား တက်လိမ့်မည်။ မိမိလုပ်ငန်းများကို အင်နှင့် အားနှင့် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်သင့်သော်လည်း ဖြတ်လမ်းမလိုက်ရန် သတိပေးလိုပါသည်။ မိမိအား ပြဿနာလုပ်နေသူများ ရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားမည်။ မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည်။ အဖိုးတန်ကျောက် မျက်ရတနာများ ၀င်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် သောကရောက်ရသော ကာလဖြစ်သည်။ အထက်လူကြီး၊ မိသားစု ကြီးကဲသူများကြောင့် စိတ်ညစ်ရမည်။ အတူနေမိသားစုထဲမှ အကြီးအကဲ အဘိုး အဘွားများအရေးဖြစ်တတ်သည်။ လူမျိုးခြား၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ အကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ ခရီးများ မကြာခဏ […]
7 days Horoscope for November 2013
၂၀၁၃-ခု ၊ နိုဝင်ဘာလအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း 07:07 sayaheintintzaw sayaheintintzaw No comments တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်း ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်သစ်ဆောက်လျှင် ကောင်းအချိန် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအသစ်ပေါ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်ရှိအလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်အသွယ်သစ်များ။ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နာမည်ကောင်းရခြင်း နေရာကောင်းရခြင်း၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရခြင်းများ လုပ်ရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်မရှိသူများ အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလဖြစ်သည်။ ဇာတာရှင်သည် ယောက်ျားဖြစ်ပါက အိမ်ထောက်ကျလျှင် ကောင်းပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်လျှင် စည်ကားသော မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အိမ်သုံးပစ္စည်း ၀င်တတ်သည်။ သူခိုး၊ မျက်စေ့ အကျခံရတတ်သော ကာလဖြစ်၍ သူခိုး အခိုးခံရတတ်ကြောင်း သတိပြုပါလေ။ ခရီးအကျိုးပေးသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားဖူးခရီး သွားရတတ်သည်။ ကွဲကွာနေသော […]
7 days Horoscope for October 2013
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် – ******************** ယခုလသည် မိဘကို ကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ စီးပွားသိသိသာသာ တက်မည်။ သိကြား မ လိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက် များစွာမြင့်တက်သွားလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မူရမည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ပြု လုပ်နိုင်သော ကာလ၊ လုပ်ငန်းဟောင်းများ ပြန်ပေါ်တတ်သည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာစရာခရီးများ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများ သွားတတ်သည်။ ၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူးတက်ခြင်း အခြေအနေ အဆင့်အတန်း မြင့်တက်ခြင်းများကြုံမည်။ သင်တန်းတစ်ခု တက်ရခြင်း ပညာကောင်း ရခြင်းများ ကြုံမည်။ မိတ်ဆွေကောင်း ဆရာကောင်များ တွေ့မည်။ အဖိုးတန်စက်ပစ္စည်များဝင်မည်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေရှာရလွယ်ခြင်း ငွေအ၀င်အထွက် ကြမ်းခြင်းများ ကြုံလိမ့်မည်။ ရပ်ဝေးမှစာများ အဆက်အသွယ်များ ရလာမည်။ ရန်များခြင်း စကားများဖြေရှင်းရခြင်း ရင်နှီးသူများ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် […]
7 days Horoscope for September
“၂၀၁၃-ခု ၊ စက်တင်ဘာလအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း” တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဤလအတွင်း၌ သင်သည် အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာများ ကြုံတွေ့လာရလိမ့်မည်။ ယခုကာလတွင် အိမ်ထောင်ပြုပါက တည်မြဲသော အိမ်ထောင်မဖြစ်နိုင်၊ အိမ်ထောင်ပြုလျှင် သားသမီး ပါလာတတ်သည်။ လုပ်ငန်းသစ်များ စတင်ရတတ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည်လည်း လွန်စွာကျိုးပေး အောင်မြင်မည်။ အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်သည်။ ရွှေဝင်မည်။ ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်မည်။ ဘုရားဆင်းတုတော်၊ ပုံတော်များ ကြွလာမည်။ သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းသောနိမိတ် ဖြစ်ပါသည် ဤကာလအတွင်း၌ စီးပွားအလွန်ကောင်းသကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်တရား အထူးအရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အမှုအခင်ဖြစ်နေသူကို ငွေမချေးပါနှင့်၊ အာမခံ မလိုက်ပါနှင့်၊ သတိပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပတ္တမြား မြ ထွက်တတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် […]
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ——————– ဒီလအတွင်းမှာ ကံအညံ့လေးတွေ များနေပါတယ်။ အဖက်ဖက်က အနှောင့်အယှက် ရှိမယ်။ ခရီးသွားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးယတြာပါပဲ။ နေရာသစ်၊ အိမ်သစ်၊ လုပ်ငန်းသစ်၊ အစီအစဉ်းများ အထူးပဲကောင်းပါတယ်။ ရပ်ဝေးပြည်ပကိစ္စတွေ အတွက်လည်း ဦးစားပေးပြီး စီစဉ်သင့်ပါတယ်။ ကွဲကွာနေသူများ ပြန်ဆုံခြင်း၊ ရပ်ဝေးက အကူအညီကောင်းရခြင်းများ ကြုံမယ်။ ငွေကတော့ တအားဝင်သလို တအားထွက်နေလိမ့်မယ်။ မထင်မှတ်တဲ့ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ အခွင့်အလမ်း ကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အသီးအနှံ၊ ရေထွက်ကုန်၊ သစ်၊ သံ၊ သွတ်၊ အလုပ်များ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်၊ သူခိုး၊ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်များ၊ ချစ်သူရည်စားများ၊ ရပ်ဝေးခွဲရ ကိန်းရှိနေပါတယ်။ ထီဝါသနာပါရင် (၁၄)အတွဲလိုက် စတဲ့ […]
Posted in Astrology, Myanmar/Burmese | No Comments »
တခါတရံမှာ လူတဦးတယောက်ကို အခြားလူတယောက်က တမင်တကာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စေတနာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုမူဆက်ဆံပြောဆိုမှုလေးတွေဟာ တဖက်သားရဲ့ရင်ထဲမှာ ဆူးစူးသလို ဒဏ်ရာအနာတရလေးတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူကြီးမိဘ၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ ပဲ့ပြင်ဆုံးမမှုတွေကို ကလေးငယ်တွေက မတရားဘူးလို့ လက်ခံသွားမိတဲ့အခါ ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ နုနယ်တဲ့ နှလုံးသားတွေမှာ ဆူးလေးတွေ စိုက်ဝင်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ပဲ့ပြင်ဆုံးမမှုဆိုတာမှာ စေတနာနှင့် အကျိုးကိုမျှော်ပြီး ဆုံးမကြတာများပေမယ့် တခါတရံမှာ ဒေါသအလျောက် လက်လွန်ခြေလွန် ဖြစ်သွားတတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူတယောက်ဟာ ထိခိုက်နာကျင် ခံစားရပြီဆိုရင် မတရားမှု (injustice) ရဲ့ အရိပ်အငွေ့လေးတွေက သူ့အာရုံကို လွှမ်းမိုးလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကို injustice gap လို့ ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ injustice gap က ကြီးထွားရင် ခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့ […]
Posted in Articles, Photography | No Comments »
မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ကံဇာတာ
2013 မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ကံဇာတာ ——————————————————- # တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အိုးအိမ်၊ အလုပ်၊ နေရာဌာန အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခုရှိနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲအတွက် လူပန်းစိတ်ပန်းဖြစ်မည်။ မယူချင်သော တာဝန်များ ယူရတတ်သည်။ မိမိနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ဘက်များကို အနိုင်ယူနိုင်မည်။ ခင်မင်ရင်နှီးနေသော မိတ်ဆွေတစ်ဦး နှင့် မိတ်ပျက်တတ်သည်။ ရွှေ အ၀ယ်မှား/အရောင်းမှား တတ်သည်။ သတင်းမှား ကောလာဟလတစ်ခုကြောင့် စိတ်ဒုက္ခရောက်ရမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လက်အောက်လူအချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ လက်အောက်လူ ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ သို့သော် အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်ပြောင်းလဲမှု များမည့်လ, ဖြစ်သည်။ = ယတြာပြုလုပ်လိုပါက – တန်ခိုးကြီး ဘုရားတစ်ဆူတွင် ရွှေသင်္ကန်းဖြစ်စေ (ရွှေသင်္ကန်း အလှူငွေဖြစ်စေ) ကပ်လှူလိုက်ပါ။ ယခုလတစ်လလုံး “၀က်သား” […]
Astro-Horo ကဏ္ဍတွင်အသစ်တင်စာအုပ် “၂၀၁၃-ခုနှစ်၁၂ ရာသီ ဟောကိန်းများ (စံဇာဏီဘို) khtnetpc.webs.comတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ (မိမိတို့ မွေးဖွားသည့် နေ့အလိုက်စာအုပ်များကိုအောက်ပါလင့်များတွင်လည်း တိုက်ရိုက်ဒေါင်းနိုင်သည်) ကုမ်ရာသီ (Aquarius) ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် အတွင်းမွေးဖွားသူများ download link မိသ၁ရာသီ (Aries) မတ် ၂၁ ရက်မှ ဧပြီ ၂၀ရက် အတွင်းမွေးဖွားသူများ download link မေထုန်ရာသီ (Gemini) မေ ၂၂ ရက်မှ ဇွန် ၂၁ ရက် အတွင်းမွေးဖွားသူများ download link ကရကဋ် ရာသီ (Cancer) ဇွန် ၂၂ ရက်မှ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်အတွင်းမွေးဖွားသူများ download link မကာရရာသီ […]
Posted in Astrology, shweDarling |3Comments »
2013 Numerology Forecast by Zinyaw Ni
Food Photography: Big Breakfast
As per Chinese Astrology and Chinese almanac (“Tong Shu“), auspicious wedding dates in 2012 are as follows: JANUARY 2012 – Auspicious Marriage Dates 5,7,9,10,12,14,15,19,21,22,24,31 FEBRUARY 2012 – Auspicious Marriage Dates 2,3,4,6,12,13,16,21,24,25,28 MARCH 2012 – Auspicious Marriage Dates 4,5,11,14,16,19,22,24,26,28,29,31 APRIL 2012 – Auspicious Marriage Dates 3,6,11,12,15,23,27 MAY 2012 – Auspicious Marriage Dates 5,7,9,12,15,18,19,24,25,27,31 JUNE 2012 – Auspicious Marriage Dates 2,4,5,6,9,12,13,15,18,27,28,29,30 JULY 2012 […]
Cooking with Phwe Phwe and her mum
Cooking Shan Khout Swe with Phwe Phwe and her mum
Posted in Food, Myanmar/Burmese |3Comments »
Food Photography: Pineapple Fried Rice
Food Photography: Pancakes
Myanmar Thingyan 2012 Photos (Yangon & Mandalay)
Yangon Thingyan. Photos: Eleven Media Group Mandalay Thingyan. Photos: Kyawmoe
Posted in Myanmar/Burmese, Photography |4Comments »
Aries (Mar 21- Apr 19) – is the cardinal/fire sign. Aries people need to keep physically busy. They accomplish many things simply because of their restless energy. They need to learn how to make constructive use of their energetic efforts. The typical Aries urge is to take on more than can be done reasonably well. […]
Photography: Green Nursery
Source: ohdeedoh.com via Sarah on Pinterest Source: flickr.com via Sarah on Pinterest Source: all-things-tickled-pink.blogspot.com via Tamara on Pinterest Source: homeworkshop.com via Rose on Pinterest Source: flickr.com via Sarah on Pinterest Source: inspirationfordecoration.blogspot.com via Diana on Pinterest Source: babylifestyles.com via Cat on Pinterest Source: 3.bp.blogspot.com via Kristin on Pinterest Source: projectnursery.com via Sara on Pinterest Source: […]
Source: Uploaded by user via Yasemin on Pinterest Source: emmas.blogg.se via Sunny on Pinterest Source: bhg.com via Carolyn on Pinterest Source: bhg.com via Chelsey on Pinterest Source: hermanmiller.com via Leslie on Pinterest Source: alspics.com via Megan on Pinterest Source: potterybarn.com via fabulousplaces.co.uk on Pinterest Source: theresejacintodesign.blogspot.com via LiliPaz on Pinterest Source: gallery.apartmenttherapy.com via Renate on […]
Source: badbullmedia.com via Maxine on Pinterest Source: houseandhome.com via Jeanne on Pinterest Source: thekitchn.com via Maxine on Pinterest Source: bhg.com via Natalie on Pinterest Source: marthastewart.com via Gaylene on Pinterest Source: southernliving.com via Cait on Pinterest Source: sprk.ca via Jenni on Pinterest Source: interiordesigning.net via Bambi on Pinterest Source: google.com via Wendy on Pinterest Source: […]
Yearly horoscope 2012 for each star sign
Aries: Horoscope 2012 clearly shows that this is the time for the Aries to relax and rejuvenate. Put all the apprehensions of the horoscope year 2011 behind you and continue on. Focus on your close bonds and cherish them, as this is the best way to enhance the year. Taurus: Horoscope in 2012 has the […]
Small & Cozy Bedrooms
Source: Uploaded by user via Devin on Pinterest Source: bloglovin.com via Stephanie on Pinterest Source: apartmenttherapy.com via Julie on Pinterest Source: houzz.com via Tracy on Pinterest Source: vtinteriors.blogspot.com via Anna on Pinterest Source: houzz.com via Kelly on Pinterest Source: apartmenttherapy.com via Leah on Pinterest Source: houzz.com via Christine on Pinterest Source: s936.photobucket.com via sue on […]
Bi Lat Pyan (ဘိလပ်ပြန်)
Burmese Jewel Tycoon Phone Thaw Kha of Thambula Collection. Location: Old Bagan, in front of Thambula Temple Photography: Phone-Myat Htoo Jewel: Thambula Collection Shoes & Luggage: Louis Vuitton Bag & Belt: Hermès Watch: Cartier
Posted in Fashion & Shopping, Myanmar/Burmese, Photography | No Comments »
Pretty Quotes on the Wall
Food Photography: Burger
Food Photography: Green Papaya Salad
Food Photography: Kimchi Stew/Soup
Find out what animal you are according to Burmese Zodiac Wheel. The Burmese zodiac is based on the day one was born. Zodiac animal sign:Garuda (mythical bird, Hindu/Buddhist bird diety) Day of Week Born: Sunday Ruling Planet: Sun Ruling Direction: Northeast Personality/Attributes of the Garuda: You are kind and generous. You would give the shirt […]
Astrology & Sex are closely knitted to each other as it is quite often said and believed that sun signs determine the sexual desires. Aries Raunchy Aries is one of the most passionate and impetuous of the signs. Feelings run high when ardent Aries is around. You go all out for what you want – […]
Posted in Astrology, Knowledge Base | 1 Comment »
Photography: Nursery Room
Food Photography: Pasta Bake
Myanmar actresses May Than Nu, Melody and Moe Yu San are looking elegant in Jade Jewelry. A little bit about Jade & Astrology Jade is usually translucent to opaque. Its colors range from apple green to emerald green, and almost-white to greenish white. Jade can be highly polished. Jade is hard and does not scratch […]
Posted in Astrology, Fashion & Shopping | 8 Comments »
Pad Thai recipe (Janelle Bloom, source) Ingredients: 1 cup bean sprouts, trimmed 100g rice stick noodles2garlic cloves, crushed 2cm piece ginger 1 long red chili Peanut oil2chicken thigh fillets, sliced ¼ cup peanuts, chopped 1 egg, lightly beaten 1 tbs grated palm sugar or brown sugar 1 tbs lime juice2[…]
National Geographic View more presentations from Mircea Ionita.
New Zodiac Signs for those born after 2009
The New Dates * Capricorn: January 20 – February 16 * Aquarius: February 16 – March 11 * Pisces: March 11- April 18 * Aries: April 18- May 13 * Taurus: May 13- June 21 * Gemini: June 21- July 20 * Cancer: July 20- August 10 * Leo: August 10- September 16 * Virgo: […]
Steamed Fish Burmese Recipe
Click on the image for an enlarged version. Source: The Bloom Magazine
Posted in Food, Myanmar/Burmese | No Comments »
Believe it or not, there truly isabetter way to eat noodles! Calamete isauniquely designed Japanese fork modification made especially for spinning your favorite noodles with ease due to its projecting “thumb” piece that simulatesahand. Perfect for any spaghetti or other long noodle lover. You can buy it from this […]
Posted in Fashion & Shopping, Food | No Comments »
Udon (Wikipedia) Udon (饂飩?, usually written as うどん) isatype of thick wheat-flour noodle popular in Japanese cuisine. Udon is usually served hot as noodle soup inamildly flavoured broth, in its simplest form as kake udon, served in kakejiru made of dashi, soy sauce (shōyu), and mirin. It is usually topped with […]
All gems are related to planetary forces, and anyone wearing jewels from their natal planets will be in harmony with his or her stellar rays. Many people prefer to use stones that relate to their astrological sun sign. Your sun sign is the sign that most people identify with when looking up their horoscope. These […]
How to make puri (by Annaga & Than Thar Win)
Myanmar singer couple Annaga & Than Thar Win showed us how to make an Indian Indian bread, puri. Puri is prepared from atta (stone-ground whole-wheat flour) dough and salt, by spreading it out inacircle the size of one’s palm and deep frying in ghee (clarified butter) or vegetable oil. In Pakistan and in […]
Posted in Asia Entertainment, Food | 1 Comment »
Recipe (source) Servings:4Prep Time: 15 mins Total Time: 25 mins Ingredients – 1 lb ground beef – 1/2 onion – 1 egg – 1/4 cup milk – 1 cup panko – pepper (to season) – vegetable oil, for frying –3tablespoons ketchup –3tablespoons Worcestershire sauce Directions – 1 Chop onion […]
What is Sukiyaki? Sukiyaki isaJapanese dish in the nabemono (Japanese Hot pot) style. It consists of meat (usually thinly sliced beef) slowly cooked or simmered at the table, alongside vegetables and other ingredients, inashallow iron pot inamixture of soy sauce, sugar, and mirin. Before being eaten, the ingredients are […]
Buk Kut Teh Recipe (source) Ingredients : 1kg pork spareribs 60g fragrant solomonseal (yu zhu) 60g red dates 30g black peppercorns2whole star anise (ba jiao) 20g cinnamon bark (gui pi) 5g preserved mandarin orange peel (chen pi) 250g whole garlic 3.5 liter water Seasoning: 1 tbsp dark soy sauce2tbsp salt Method […]
Burmese Rice Salad Recipe (Htamin-lethoke) Ingredients “Rice mixed with fingers” From Marisa Ferraz, Sun Pictures, Broome WA Served cold Serves approx. 122cups long grain rice, washed several times then cooked (Use3½ cups of water – general rule when cooking rice is to add 1 ½ cups of water per 1 cup […]
Some of the colorful vegetables and fruit that are good for your health are: – Vegetables and fruit that are RED in color, for example, tomatoes, strawberries and watermelons – Vegetables and fruit that are GREEN in color, for example, peas, avocado, bok choy, kiwi fruit – Vegetables and fruit that are YELLOW AND ORANGE […]
Burmese Version Source: Mandalay Icon Magazine Vietnamese Version Ingredients: * 1 large fish head or fish carcass, split down the center *2scallions, white part only, crushed with the side ofaknife * Sprinkling of freshly ground black pepper *2teaspoons salt *2tablespoons plus *4teaspoons Vietnamese fish sauce […]
There are quiteafew beautiful photos of Myanmar at Garuda Indonesia International Photo Contest 2010 – My Beautiful Country. Here are some of our favourites that made it to the finalists, top 500. Title : Just before sunrise Location : Myanmar Name : Aung Pyae Soe Country : Indonesia Title : Dusty Evening Location […]
Posted in Myanmar/Burmese, Photography |2Comments »
Food Photography: Korean Stone Rice – Bibimbap
Bibimbap Recipe Serves4This can be served at room temperature on top of hot rice in individual bowls. Korean Markets typically have many varieties of side dishes in their refrigerator cases. You can buy some and make some of your own. The Toppings Use 1 cup of each of the vegetable toppings for the […]
Numeric Astrology by San Zarni Bo
Click on the image to Enlarge By San Zarni Bo as published in Lifestyle Magazine
10 Amazing Photo Manipulation
Havealook at these amazing photo manipulation works done by talented designers and artists around the world. Source: pelfusion
Hainanese Chicken Rice Recipe (from about) A local specialty from the island of Hainan off the coast of China Serves4Ingredients: * Chicken: * 1 whole chicken, about3pounds * 1 teaspoon salt *2cloves garlic, peeled *4slices fresh ginger, peeled *4scallions, trimmed * about 12 cups water […]
5 Japanese Weirdest Kit Kit Flavours
Apple Vinegar KitKat Candid Sweet Potato KitKat Sweet Corn KitKat Soy Sauce KitKat Baked Potato KitKat
Posted in Food, WWW/News | 1 Comment »
Chinese Fried Rice Recipe (from chinesefood.about.com) Serves4to6This isabasic recipe for fried rice that you can add to as desired. If adding other ingredients, increase the number of eggs to 3. Ingredients: * 1 –2green onions, as desired *2large eggs * 1 teaspoon salt * Pepper […]
Keywords for each star sign
Aries Aries is energetic, innovative, original, pioneering, assertive, quick-tempered, strong drive, leader, ambitious, extroverted, sometimes aggressive, competitive, enthusiastic, self-reliant, and self-assured. Taurus Taurus is determined, efficient, stubborn, cautious, placid, persistent, enduring, introverted, conservative, conventional, materialistic, security conscious, stable, industrious, dependable, and one generally having significant financial ability. Gemini Gemini is flexible, versatile, restless,ajack-of-all-trades, […]
Food Photography: Pasta
Posted in Food, Photography |7Comments »
Chinese Horoscopes for 2010 – the year of tiger
Pig (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Positive: Gallant, kind-hearted, and sincere. Pigs rarely lose their temper and always try to avoid arguing. Negative: Materialistic and pig-headed. These individuals haveaproblem saying “no” — to people, and to food! Chinese Astrology Horoscope 2010 for the Pig: While the love life is expected […]
Food Photography: Salad
Free Yearly Astrology Forecast/Predictions for 2010 from various astrology websites ARIES | TAURUS | GEMINI | CANCER | LEO | VIRGO | LIBRA | SCORPIO | SAGITTARIUS | CAPRICORN | AQUARIUS | PISCES ARIES | TAURUS | GEMINI | CANCER | LEO | VIRGO | LIBRA | SCORPIO | SAGITTARIUS | CAPRICORN | AQUARIUS | […]
Photography: Myanmar Family
Posted in Myanmar/Burmese, Photography | No Comments »
Knitted by Ed Bing Lee Source: toxel
Bread Shoes by R&E Praspaliauskas The shoes come inavariety of designs and dough recipes and are not wearable on foots. You can buy them here.
Posted in Myanmar/Burmese, Photography | 12 Comments »
Food Photography: Vietnamese Pho Soup
San Zarni Bo – Astrology ebooks
စံဇာဏီဘို – အချစ်ဗေဒင် စံဇာဏီဘို – အချစ်လက္ခဏာ
Posted in Astrology, Myanmar/Burmese | 60 Comments »
မိဿအချစ်ဒဿန (ARIES) မိဿရာသီဖွားတို့၏ နှလုံးသားသည် အလွန်မြင့်မြတ်သိမ်မွေ့သည်ဟု ကမ္ဘာ့နက္ခတ်ပညာရှင်များက တညီတညွတ်တည်း သတ်မှတ်ထားသည်။ “နှလုံးသားစစ်ပွဲများ။ဒဏ်ရာဒဏ် ချက်များ၊မီးတောက်၊မီးလျှံမျာြး ကားမှ အလွန်ချစ်တတ်သော နှလုံးသားပိုင်ရှင်၊ မြင့်မြတ်သော အချစ်ရှိသူ”ဟု ဖော်ကျူးထားသည်။ အပြင်သဏ္ဌာန်တွင် ကြမ်းတမ်းသည်ဟု ထင်ရလင့်ကစား အတွင်းစိတ်မှာနုညံ့သည်။ မေတ္တာရေးတွင် အပေးသမားဖြစ်သည်။ရယူခြင်းထက် ပေးဆပ်ခြင်းကို ဦးစားပေးမည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုချစ်မိလျှင် မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံ။ မုန်းမိလျှင်လည်း မမေ့နိုင်။ သံယောဇဉ်တနွယ်နွယ် ဖြစ်တတ်သည်။ သဘောထားကြီးမြတ်မည်။ သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်သော အချစ်နှင့် နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ “အလွန်အချစ်ခံလိုသော အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။အချစ်အားလိုလားသည်။ မိမိအပေါ် အေးအေးချမ်းချမ်း သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နူးနူး ညံ့ညံ့ အလေးပေး၍ ဆက်ဆံသူအား လိုလားသည်။ ထို့အပြင် သနားချစ်၊အားနာချစ်ကိုလည်း ဦးစားပေးတတ်သည်” အချစ်ရေးကိစ္စ၊အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စ အားလုံးစုံတွင် ဦးနှောက်ကို ဦးစားမပေး၊ နှလုံးသားနှင့် ဆုံးဖြတ်တတ်သည်။ […]
Click on the image to enlarge Shwedagon Pagoda, Yangon, Myanmar
Posted in Myanmar/Burmese, Photography | 1 Comment »
Kulfi or Indian Ice-cream Recipe (Video)
What is Solar Eclipse? (Ref: Wikipedia) A solar eclipse occurs when the moon passes between the Sun and the Earth so that the Sun is fully or partially covered. This can only happen duringanew moon, when the Sun and Moon are in conjunction as seen from the Earth. At least two and up […]
Posted in Astrology, Knowledge Base, WWW/News | No Comments »
Myanmar Restaurant in Sydney – Bagan, Strathfield
Bagan Restaurant, located in Strathfield, Sydney, New South Wales is the only authentic Burmese restaurant in Sydney, Australia. Address Shop 4, 41 The Boulevard Strathfield, NSW 2135 (02) 8746 0666 Opening Hours Tue – Sun: 11am – 10pm Closed on Monday Our recommendation Entree Fried Long Melon ($5.50) Salad * Have it as an entree […]
Thingyan Sar for Myanmar Calendar 1371 (English Calendar 2009 – 2010)
Posted in Astrology, Myanmar/Burmese |6Comments »